भारतीय मिडियाले हाम्रा अविभावक माथि गरेको अनगर्ल प्रचारको सबै मिलेर सामना गरौं !! - Lekhapadhi : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २५ असार २०७७, बिहीबार २०:२८ मा प्रकाशित
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी बीच गरिएको अनगर्ल प्रचार एकदमै खेदपुर्ण छ । त्यो मिडियाबाट भएको प्रचार आखिर के हो त ? सबिस्तारमा तल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । कृपया पढेर प्रतिकृया दिनु होला । साथै त्यो मिडियाका २ जना प्रस्तोताको र तिनै मिडियाले जोडेर बनाएका प्रधानमन्त्री ओली र राजदुत यान्छीका केही तस्विर पनी राखेको छु ।
ओलीका दिल यान्छीको देखकर ओले ओले कर्ने लगा ! ओ हर फैसले लेनेसे पहेले यान्छीको सल्लाहा लेने लगा ! यि माथिको तस्विरमा देखिएकी महिला प्रस्तोताले यति भने पछी नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालका लागी चिनीयाँ राजदुत होउ यान्छीका बीच बिभिन्न समयमा भएका भेटका तस्विर तथा अन्य केहि तस्विर देखाउदै दिलतो बच्चा है जी….! भन्ने हिन्दी गीत बजाइन्छ ।
लगत्तै अर्का पुरुष प्रस्तोता आउँछन र भन्छन ‘यान्छीका इस्क के जालमे फसकर विन पानीके मछली जैसे तडप्ने लगा, अब जो यान्छी बोले ओ ओली किया कर्ने लगा’ ! पृष्ठभूमिमा उहि गीत बजीरहन्छ । ओली र यान्छीका तस्विर त्यसरी नै छताछुल्ल पारि नै रहन्छन् । पुनः महिला प्रस्तोताले भन्छीन् ‘ओलीको लगा सफेद होति उम्र मे रंगीनिया सी है, लेकीन ये एक झलावा निक्ला’ । पुनः फेरी पुरुष प्रस्तोताले नै ‘यान्छीके नजरौंके तिरसे ओलीको घायल कर्दिया, दर असल ये एक साजिस थि’ ! यस्तो भन्दै प्रेम प्रर्कट गर्ने गीत बजाइ रहन्छन् ।
यो श्रृखला यत्तिमै रोखिदैन । ओली न घरका न घाटका भए भनी अझै बकवास युक्त यो कार्यक्रम अगाडि बढीरहन्छ । यो सब ‘Zee विहार झारखण्ड’ भन्ने युट्युब च्यानलबाट प्रशारण भइरहेको छ । नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताले बुधबार बेलुकादेखी सेयर गरिरहेका छन् । नेपालमा पनी छन् यस्ता धेरै युट्युब च्यानलहरु तर कहिले पनी न भारत नत अन्य कुनै देशका बिरुद्वमा यस्ता भ्रमात्मक कुरा प्रचार-प्रसार गरेका छनन् । भारतीय मिडियाको यो ज्यादतीको जतीनै भ्रत्सना गर्दा पनी कम हुन्छ ।
यस बिषयमा आ-आफ्ना धारणा सहित विभिन्न प्रतिवाद सहितका समाचार नेपाली अनलाईन खबरहरुले प्रकाशन गरी सक्दा पनी मुलधारका मिडिया तथा सरकारकातर्फ बाट कुनै खालको आधिकारिक धारणा बाहिर आईसकेको छैन । कान्तिपुर अनलाईनले भने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा यस बारे प्रतिवाद गरेको स्टाटस प्रकासित गरेको छ ।
श्रेष्ठको स्टाटस जस्ताको तस्तै: ‘हाम्रो सरकार र प्रमका बारेमा गरेको अनर्गल प्रचारले सिमा नाघ्यो, हद भयो । बकवास बन्द गर, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एक ढिक्का छौं । विदेशीको फुटाउ र स्वार्थ पूरा गर नीति सफल हुन दिनेछैनौं । यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसरी राष्ट्रियता र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राखेको फेसबुक स्टाटसमा सरोकार वाला निकायको ध्यान पुग्यो की पुगेन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
भारतले नेपाललाई सानो देश अर्थात ‘नेपाल हमारा छोटा भाई है’ भन्ने गरेको हामी जो कसैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपाल कसरी छोटा भाई भयो ? सन् १९४७ मा अंग्रेज बाट स्वतन्त्र भएर ७३ बर्षे ईतिहाँस बोकेको देश बडाभाई कसरी भयो ? जबकी नेपाल परापुर्बकाल देखि अस्तित्वमा थियो । ३ हजार बर्ष पुरानो हाम्रो ईतिहाँस छ । अंग्रेज संग लडेर जितेको ईतिहाँस हामी संग छ । के नेपाल भौगोलीक रुपमा सानो भयो भन्दैमा हाम्रो राष्ट्रियता सानो भन्ने ठानेको हो भारतले ? यदी यो ठानेको भए आफ्नो गल्ती सच्याओस । अन्यथा कुनै पनी राष्ट्रको भौगोलीक अखण्डता तथा क्षेत्रफल सानो हुदैमा राष्ट्रियता सानो वा थोरै हुने भन्ने हुदैन ।
मानौ, हामी बिकासमा भारत भन्दा केही पछाडि छौं, त्यो भन्दैमा हरेक क्षेत्रमा भारतले हेपेको चेपेको कुनै पनी राष्ट्रभक्त नेपालीलाई सहृैय हुदैन । भारतका मिडिया साना हुन या ठुला यसरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा अनगर्ल प्रचार गर्नु भनेको सिधै हाम्रो राष्ट्रियता माथीको अपमान हो । प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीनै हो हाम्रो देशको । लाटो वा कम पढेको भनेर जन्म दिने बाबुलाई बाबु नभन्ने भन्ने हुदैन । जस्तासुकै होउन बाबु भनेका बाबु नै हुन् । त्यस्तै हाम्रा लागी हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता सुकै होउन र जुन सुकै बिचार र पार्टीका होउन अहिले ३ करोड नेपालीका अबिभावक हुन् ।
हाम्रा अबिभावक माथी यसरी प्रहार गरेको, भारतीय मिडियाको यो ज्यादती, अपमान र अत्याचार युक्त प्रचारबाजी कसैलाई पनी स्विकार्य छैन ।
अबिभावक जसरी सन्तान प्रति जिम्मेवार हुन्छन त्यसै गरी हामी ३ करोड नेपाली पनी यती बेला एक ढिक्का भएर आफ्ना अबिभावक प्रतिको रक्षार्थ लड्नु र बोल्नु पर्दछ । यो हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता माथिको सोझो प्रहार हो यसको हामी सबैले एक ढिक्का भएर सामना गर्नै पर्दछ ।
Please emailus your creativity in:- lekhapadhee@gmail.com